Demosana Effervescent Tablets: Magnesium: Buy Online at Best Prices in Myanmar | Shop.com.mm
Demosana Effervescent Tablets: Magnesium
Brand: Demosana Brand
More Food Supplements from Demosana Brand
Spend Ks 10,000 and geta10% discount
N/A Brand Warranty
Product details of Demosana Effervescent Tablets: Magnesium
Magnesium ကြွှယ်ဝစွာပါဝင်ခြင်း (375 mg per serving)
တနေ့ တာ လိုအပ်သော Calcium ပမာဏကို အပြည့် အ၀ဖြည့် တင်းပေးနိုင်ခြင်း
အပြား ၂၀ ပါဝင်ခြင်း။
လူကို လန်းဆန်းစေသော Lemon အရသာ
Gluten, Lactose, Animal Ingredient နှင့် Sugar မပါဝင်ခြင်း
Magnesium – Muscle Refresh
☑ပုံမှန်နှလုံးခုန်နှုန်း - နှလုံးကြွက်သား စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သောကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ်ဓါတ် နည်းပါးပါက arrhythmias (မူမမှန်သော နှလုံးခုန်နှုန်း)ကို ဖြစ်စေတတ်တယ်။ ထိုကဲ့ သို့ arrhythmias အခြေနေမျိုးတွေ ဆရာဝန်တွေဟာ Magnesium ဓါတ်ပေါင်းတမျိုးကို အရေးပေါ် ညွှန်းကြားလေ့ ရှိတယ်။
☑ရင်ခေါင်းအောင့် ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း - မဂ္ဂနီစီယမ်သည် နှလုံးသွေးကြောများ ရုတ်တရက် ကျုံ့ ခြင်းမှာ အထူးကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောများ ရုတ်တရုတ်ကျုံ့ ပါက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရင်ခေါင်းအောင့် ခြင်း ဝေဒနာကို ခံစားရပါတယ်။
☑သွေးပေါင်တက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း - မဂ္ဂနီစီယမ်ဟာ သွေးကြောနံရံတွေကို ဖြေလျှော့ ပေးခြင်းကြောင့်သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး သွေးပေါင်တက်ခြင်းမှ အထူးကာကွယ်ပေးတယ်။
☑Heart Failure ကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။
ဒီမိုဆာနာ - Demosana Brand – မဂ္ဂနီစီယမ် (Magnesium) ရေဆူအားဆေးပြား
☑ဒီမိုဆာနာတံဆိပ် ရေဆူအားဆေးများကို ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး မြန်မာ့ FDA ထောက်ခံချက် ရရှိထားပြီး ဖြစ်သောကြောင့်စိတ်ချလက်ချ မှီဝဲနိုင်ပါတယ်။
☑တနေ့ လျှင် ရေဆူအားဆေး ၂ပြားအထိ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး အစေ့အဆံများအစားများသောနေ့တွင် တနေ့တပြားမှီဝဲနိုင်ပါတယ်။
Nutritional Values per serving - NRV
Magnesium ကြွှယ်ဝစွာ ပါဝင်သောကြောင့်ကြွက်သားများကို သန်မာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်စာစားပြီးတိုင်းတကြိမ်၊ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း တကြိမ် စုစုပေါင်း တနေ့ ၂ကြိမ် သောက်သုံးပါက သန်မာသော ကြွက်သား၊ ကြံခိုင်သော ဒူးခေါင်းဖြင့်ကျန်မာသော ကိုယ်ခနွာကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါး ဦးစီးဠာန ၏ ခွင့် ပြုချက်ရရှိထားသော Product of Germany ဖြစ်ပါတယ်။
သောက်သုံးရန် အညွှန်: တနေ့ ၂ပြား သောက်သုံးပါ။ တခါသောက် တပြားကို ၂၀၀ ml ရေထဲထည့် ပါ။
တနေ့ ကို ၂ပြားထက်မပိုသင့် ပါ။
Food Supplements are notasubstitute foravaried and balanced diet andahealthy way of living. Keeping out of young children’s reach
25’C (အချိန်အပူချိန်)နှင့် ခြောက်သွေ့ သော နေရာတွင်ထားပါ။ အဖုံး (SEAL) ဖွင့် ပြီးပါက သေချာပြန်ပိတ်ပါ။ Expiry Date ကို ဗူးအောက်ခြေတွင် ကြည့် ပါ။
Specifications of Demosana Effervescent Tablets: Magnesium
Myanmar FDA Approval Number: FIR-2018/FF/N- 691
Magnesium Eff. Tablet
1xDemosana Eff. Tablets Tube
Ratings & Reviews of Demosana Effervescent Tablets: Magnesium
by Shop Customer Verified Purchase
Good for Muscle!!!